ရွာထဲက ကြောင်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရွာထဲက ကြောင်များ
Posted by သကြားလုံးကြော် on Aug 6, 2012 in Photography | 31 comments
သကြားလုံးကြော် အရသာ ကြောင်မလေး
ဟိုတလောက Batman ရုပ်ရှင် The Dark Knight Rises ကြည့်ပြီးကတည်းက Anne Hathaway ကိုအားကျလို့ သူ့လို နှုတ်ခမ်းနီ နီနီလေးဆိုးတဲ့ ကြောင်မလေးဖြစ်ချင်တဲ့ ရောဂါထနေတာကြောင့် သကြားလုံးကြော် ကနေ ကြောင်မလေး လို့နာမည်ပြောင်းမယ်စိတ်ကူးမိတယ်။
နောက်မှ ရွာထဲမှာ ကြောင်တော်တော်များရှိမှန်း သတိရသွားတော့ ကြောင်မလေး များရှိနေပြီးပြီလားမသိဘူး။ ကြောင်တွေက အဖေ ဦကြောင် အမေ ဒေါ်ကြောင် ဆိုပြီး အမျိုးစပ်ရခက်လေတော့ နာမည်တူနေရင် လူတွေလို အဖနာမည်နဲ့ ခွဲလို့မရတော့ တူနေရင် မဖြစ်ဘူး ။
၁၀နှစ်တခါလူဦးရေကောက်သလို ရွာထဲက ကြောင်ဦးရေ ကောက်ထားတာများရှိရင် သိပ်ကောင်း။
ကြောင်ကလေးတွေ တန်းစီ (အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်းကောက်မယ်)
(မျက်စိလျှင်မလျှင်ကစားခိုင်းတဲ့ မဂ္ဂဇင်းထဲက ပဟေဋိ တွေလို ၊ အပေါ်က ပုံထဲမှာ ကြောင်ဘယ်နှစ်ကောင်တွေ့ပါသလဲ)
ရွာထဲဝင်တာမကြာသေးတဲ့သူဆိုတော့ ရွာထဲကသွားရာလမ်းလွဲ မြင်မိတဲ့ ဦးကြောင်ကြီး ၊ ကြောင်ဝတုတ်၊ ကြောင်လတ်၊ ကြောင်လေး …… စသည်ဖြင့် ကြောင်ပေါင်းများစွာက ရွာထဲမှာတမင်ဖွဲ့ထားတာလား ၊ အပြင်မှာ တကယ်ပဲ အမျိုးတော် လို့လား ၊ သူတို့ရောဘယ်လိုကြောင်ဖြစ်လာကြတာလည်း စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ရွာထဲကကြောင်တွေအကြောင်း ကလည်း သေချာမသိတော့ ဘုမသိ ဘမသိ ကြောင်ဂိုဏ်းထဲဝင်လိုက်မိပြီးမှ ဒုက္ခဖြစ်နေမှာစိုးရသေးတယ်။
စိတ်ထဲမှာ မြင်မိတဲ့ ရွာထဲက ကြောင်ဂိုဏ်း က ဒီလိုလားမသိ။ ဦးကြောင်ကြီးဆိုတာ ညာဖက်ကကြောင်လို ဂိုဏ်းချုပ် များလား။
Qualification အတွက် အစွယ်တွေထုတ်ပြရမလား
သူကြီးက ရွာလူဦးရေတက်အောင် မင်ဘာအသစ်တွေကို ပိုက်ဆံပိုပေးနေတယ်ဆိုတော့ သူကြီးကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ရွာထဲက ကြောင်ဦးရေ ပါတိုး အောင် စုမိထားတဲ့ ကြောင်တွေကိုပါ ရွာထဲပို့ လိုက်ပါတယ်။
သူ့နာမည်က Chopper တဲ့။ သူ့ကို ထိရုံနဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေလို အသံအလွန်ကျယ်လို့ Chopper. (One Piece ကာတွန်းထဲက reindeer Chopper မဟုတ်ပါ။ ) သူက ၁၅ ပေါင်လေးပါတယ်။ အချိန်မရွေး အမြဲ ဗိုက်ဆာနေတတ်တယ်။
အစကတော့ဖြင့်ပိန်ပိန် …. ၀သွားပြီ ၊အခုတော့ ၀သွားပြီ …..( ရွာထဲကကြောင်ဝတုတ်ဆိုတာ ဒီလိုများလားမသိ)
ဆောင်းတွင်းမှာ မာဖလာကလေးပတ်၊ စောင်ကလေးခြုံ
အလွန် လျှာရှည် စပ်စု တဲ့ မီဆာ (Death Note ထဲက အသံစာစာ Misa Misa ကိုအစွဲပြုလို့) ။ မှတ်မှတ်ရရ စားပွဲပေါ်က ကင်မလာကို ၀ုန်းကနဲ ကြမ်းပေါ်ကျအောင် ဆွဲသွားလို့ အစေးမကပ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ အခုတော့လည်း သားသမီးကို ခွင့်မလွှတ်တဲ့ မိဘမရှိသလိုပဲ သနားစရာ မီဆာလေးကို ခွင့်လွှတ်ထားပါတယ်။ ပုံတွေမကောင်းရင်တော့ သူ့ကိုအပြစ်တင်ပါ။ :-)
ဒီကြောင်မလေးနာမည်က ပေါင်မုန့် ။ ဆော့လို့ ဘယ်တော့မှမ၀ဘူး။ Ragdoll လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးနဲ့ Siamese အမျိုးစပ် ဆိုတော့ လှလည်းလှသလို အရမ်း ဥာဏ်ရှိပါတယ်။ သုက ငါးနဲ့ ကြက်သားနဲ့ မတည့်ဘူး ။ စားမိတာနဲ့ Allergic ဖြစ်ရော။ ငါးမတဲ့ တဲ့ကြောင်ဆိုလို့ အဲဒီတော့မှတွေ့ဖူးတယ်။ နားရွက်အမြဲယားနေတတ်လို့ နားရွက်ကို ဆရာဝန်ပေးတဲ့ ဆေးမှန်မှန်ဖျန်းပေးရတယ်။ ထွက်ပြေးသလားမမေးနဲ့။
ကိုက်မယ် ၊ဖျက်မယ် ၊ တရွက်မကျန် လွှာပစ်မယ်။ စက္ကူဖျက်စက် အကျော်အမော်ရဲ့ သွားအနုပညာ showcase.
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ကြောင်နှစ်ကောင်နာမည်က ရူပ နဲ့ နာမ တဲ့။ ရုပ်နဲ့နာမ် ပေါ့။ ရူပ ကခေါင်မိုးပေါ်ရောက်နေလို့ အိပ်နေတဲ့ နာမ ကိုပဲ ရွာထဲပို့လိုက်တယ်။
ဒါကတော့ ဆေးခန်းမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ၊ သူ့ကို မွေးစားမဲ့သူတွေကို စောင့်နေတဲ့ ကြောင်ငယ်ငယ်လေး။
ဒီလိုသနားစရာကြောင်လေးတွေကနောက်ဆုံး မွေးစားမဲ့သူ မရှိရင် အဆိပ်ငွေ့ပေးတဲ့ အခန်းထဲမှာပဲ အသတ်ခံရရော။ ဒါ့ကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဆီကနေ ကြောင်နှစ်ကောင် မွေးစားထားပါတယ်။
အဖေပြောနေကျ “အားအားယားယား အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာ ကြောင်ရေချိုးတယ်” ဆိုတဲ့ တင်စားထားတဲ့ စကားပုံကို တင်စားရုံမက တကယ်လိုက်နာပြီး ကျမကြောင်တွေကို ဆပ်ပြာတိုက် ရေမှန်မှန်ချိုးပေးတယ်။ လက်သည်းညှပ်ပေးရတယ်။ အမွှေးဖြီးပေးရတယ်။ “အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာ ကြောင်ရေချိုးတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပုံက နည်းတောင်နည်းနေ သေးတယ်ထင်တယ်။
ကြောင်လိုချင်လို့ မွေးတယ်ပဲပြောပြော၊ ကယ်ဆယ်ချင်လို့မွေးတယ်ပဲပြောပြော ၊ တိရိစ္ဆာန်မွေးတာ အကုသိုလ် ပဲပြောပြော၊ ကျမကြောင်လေးနှစ်ကောင် အိမ်မှာပျော်နေတာ တွေ့ရင် သူတို့ကိုလုံလုံခြုံခြုံနေစရာလေးပေးနိုင်မိတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ တခါတလေ အစက ဘ၀တွေမဆုံလို့များ ကိုယ်မမွေးလိုက်လို့ သူတို့တခြား ဘယ်လိုအခြေအနေများရောက်နေမလဲ စဉ်းစားမိရင် ရင်လေးသွားပြီး မွေးထားမိတာ ၀မ်းသာမိတယ်။
ကဲ ကြောင်မလေး လို့ပြောင်းပြီး ကြောင်ဂိုဏ်းဝင်သင့်ပါသလား
အပေါ်က ပဟေဋိ ရဲ့ အဖြေကတော့ ဒီမှာပါ
သကြားလုံးကြော်ရေ ကျေးဇူးပါနော် …….. အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကြောင်လေးတွေကို ပို့စ်ထဲမှာ ထည့်သုံးခဲ့တဲ့အတွက်ရော ၊ ကြောင်ပုံလေးတွေ တစုတစည်းတဲ့ မြင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပါ ။
(သတ္တ၀ါ)ကြောင်ဆိုလျှင် … ရုပ်ပဲဆိုးဆိုး ၊ ဂျိုပဲ ကျိုးကျိုး .. အကုန်ချစ်ပါတယ် …. ။ ကျွန်မက ကြောင်ခရေဇီမို့လို့ပါ …. ။
သတ္တဝါကြောင်လို့ပြောတော့ ရွာထဲက ကြောင်တွေ…ရင်ခုန်နေတော့မယ်။
တိရစ္ဆာန် ကြောင်တွေလို့ ပြောမှ ရွာထဲက ကြောင်တွေ လွတ်မှာ..
အဲဒါဆို ရွာထဲက ဘယ်ကြောင်ကြိုက်တုန်း တစ်လက်စထဲဖြေသွားပါဦးနော်…
မအိတုံရေ ၊ အားပေးသွားတာ ကျေးကျေးပါ။ ကိုယ့်လို့ ကြောင်ခရေဇီးတွေရှိတာသိရလို့ဝမ်းသာမိတယ်။ ဒီပို့စ်မတင်ခင်က တော်တော်ကြောင်တဲ့ပို့စ်ပဲလို့ ၀ိုင်းပြောမှာ စိုးမိသေးတယ်။ နောက်မှ… ကြောင်တယ်ပြောလည်းခံရမှာပဲလေ ၊ သြော် ကြောင်ချစ်မိတဲ့ ဒုက္ခ
ကြောင်ထဲမှာဆိုရင် တော့ ဂါဖီးကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ …အပြင်မှာတော့ ဒီလိုကောင်မျိုးဘယ်ရှိပမလဲ…။
ဂါဖီးလိုကြောင်ဝါ၀ါ၀၀တုတ်တုတ်တော့ တွေ့ဖူးပါရဲ့ ၊ ဒါပေမဲ့ ဂါးဖီးနဲ့ အတူဆုံး ကတော့ အသိတယောက်ဆီက Pomeranian အမျိုးအစား ၊ ခြေထောက်တိုတို ၊ အမွေးဖွားဖွား ခွေးဝါ၀ါလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ တူမှတူ
၀င်သင့် တာကြာပါပြီ……..ရွာထဲမှာလည်းကိုကြောင်တို့ ကြောင်ကလေးတို့ ရှိနေတာပဲလေ…
သူတို့ အားရှိသွားတာပေါ့ ……
ဦးကြောင်က ခုချိန်လောက်ဆို…. မာဆက်ေ၇ာက်နေလောက်ပြီ။
ကျွန်တော် က ကြောင်ထက် စာရင် ခွေးကို ပိုချစ်တယ်ဗျာ … ဒါပေမယ့် ကြောင်ပုံ လေးတွေကြည့်ရတော့လဲ ချစ်တာ ပါပဲ … ကျေးဇူးပါဗျာ … ကြောင်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာ အမော ပြေသွားတယ်။
အင်း .. ခွေးပုံလေးတွေရိုက်ချင်သား ၊ ခွေးကြောက်လို့ အနားမကပ်နိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကိုလုလင်သတိပေးမှပဲ သတ္တိမွေးပြီး ခွေးပုံလေးတွေစုထားဦးမှပဲ။ အားပေးသွားတာ ကျေးကျေးပါ။
စောင်ခြုံထားတဲ့ မီဆာနဲ့ စက္ကူဖြတ်တဲ့ ချေ့ာ့ပါ ပုံလေးတွေကြိုက်ပါတယ်။
စောင့်စားလျက် ကြောင်လေးက တကယ့်ကို ချစ်စရာ သနားစရာလေးနော်။
မွေးမယ့်သူမရှိတဲ့ကြောင်တွေကို အဆိပ်ငွေ့ပေးသတ်တယ်ဆိုတာ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
တိရစ္ဆာန်ရုံလိုမျိုးမှာ ဘေးမဲ့လွှတ်ပေးလို့ရော မဖြစ်ဘူးလား။
ဖြစ်လေရာဘ၀ အမေဒစ်ကန်မှာ ကြောင်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ။
သတ်စားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မွေးတာဆိုရင်တော့ မွေးထားတဲ့ တစ်ချိန်လုံး အကုသိုလ်စိတ်တွေ အဖြစ်များနေမှာကို ပြောဟန်တူပါတယ်။
ခုလို အသတ်မခံရအောင် မွေးတာကတော့ ဇီဝိတဒါနဖြစ်မှာပါ။
ရွာထဲမှာ အရင်က ကြေးမလောင်ဆိုတာ ရှိဖူးတယ်။ခုတော့ နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီထင်ရဲ့ မတွေ့တော့ဘူး။
ဂေါ် .. ဂေါ် .. ဂေါ် ……
အမလေး တော်ပါသေးရဲ့ ။ တယောက်ယောက်က နာမည်နဲ့ ကြောင် စလုံးနဲ့ တွဲပြီး ကဗျာစပ်တော့မယ်မှန်း သိနေတယ်။ သိပ်မဆိုးလို့တော်ပါသေးရဲ့။ ဟီဟီ
လွန်စွာ သဘောတူ ကြည်ဖြူ
အနော်လဲ ကြောင်မျိုးရင်းဝင် ဖြစ်ကြောင်း
ပညာအရည်အချင်း B.Cs ဘက်ချလာအော့ဖ် ကတ်တလော်ဂျီ ဆိုင်းယင့်စ်
ခင်ညားကြီး ပို့စ်တွေ Draft ထဲဘာလို့ ရောက်နေတာလဲ သိချင်ပါ၏……
ဟင် ဘယ်ပို့စ်တွေက Draft ထဲရောက်နေတာလဲဟင်။ နောက်ရေးချင်ရေးဖို့ စိတ်ထဲရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ တို့ထားပြီး Save Draft လုပ်ထားတာကိုများပြောတာလား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဒုက္ခပဲ။ ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးမှတ်လို့ ။ ဟီဟီ
ကြောင်လေးတွေကို မွေးစားမဲ့သူ မရှိရင် အဆိပ်ငွေ့ပေးတဲ့ အခန်းထဲမှာပဲ အသတ်ခံရတယ်ဆိုတာ ခုမှပဲ ကြားဖူးတော့တယ်။
သူ့ဖာသာ အသက်ရှင်နေတာကို ဘာ့ကြောင့်များ ဒီလို ဥပဒေမျိုး ထားရှိရပါလိမ့်။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဆီကနေ ကြောင်နှစ်ကောင် မွေးစားထားတယ်ဆိုတော့ အဲဒါမှ ဇီဝိတဒါန အစစ်ပဲ။
အဆီကို စားပါလို့ အသားကိုမြို……. လို့တော့ ကြားဖူးတာပဲ။
ကြောင်လေးတွေကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ မွေးစားမဲ့သူမရှိရင်အဆိပ်ငွေ့ပေးပြီးအသတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး… တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က တရားမစွဲဘူးလား ???
အရင်က ရွာထဲ ကြေးမလောင် တော့ရှိတယ်… အခုတော့သိပ်မတွေ့ဖြစ်ဘူး
ကြောင်မလေး နံမည်နဲ့ ကြောင်ဂိုဏ်းထဲ ၀င်မယ်ဆိုရင်တော့
အူးကြောင် ဦးကြောင် ဆိူပြီး အလင်းဆက်ကလည်း အပေါ်မှာပြောသွားသေးတယ်။ သကြားလုံးကတော့ အခုမှကြောင်လောကထဲမွေးလာတာမို့လို့ ဦးကြောင်ကို မသိဘူး။ ကြောင်အမျိုးစပ်ရရင် ဘိုးဘေးဘီဘင်တော်ရင်တော်နေမှာ။
အန်တီ ဒုံဒုံ ၊ အန်တီမမ နဲ့ ၀ါး ရေ၊ ပြောရမှာတော့ခပ်ခက်ခက်ပဲ။
အဲဒီ Animal Control တွေကပဲ လမ်းပေါ်မှာ ပိုင်ရှင်မရှိ အိမ်မရှိ ခွေးလေခွေးလွင့် ကြောင်လေကြောင်လွင့်တွေ မရှိအောင်လို့ သူတို့ကို ခဏထိန်းဖို့ ခိုလှုံစရာ shelter တွေကိုပို့ရတယ်။ Shelter တွေက ရောက်လာသမျှ တိရစ္ဆာန်တွေ အားလုံးအတွက် ဘတ်ဂျက်ရော နေရာရော မရှိတော့ တကောင်ကို တပတ် ဆယ်ရက်လောက်ပဲထားနိုင်တယ်။ ရက်ပြည့်သွားတဲ့ အကောင်တွေကိုတော့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ပိုင်ရှင်သစ်တွေ ယူရင်ယူ မယူရင်တော့ အိပ်ဆေးငွေ့ ပေးလိုက်ရရော။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက ဒီလို shelter တွေကနေ လူတွေမွေးနိုင်လောက်တဲ့ အကောင်လေးတွေကို ပြန်ရွေးထုတ်လာပြီး အိမ်အသစ်ပြန်ရှာပေးဖို့ လုပ်ကြရတယ်။ သူတို့တွေ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ နဲ့ အချိန် ကိုယ်စိုက်ပြီး မွေးမဲ့သူအသစ်ပြန်ရှာပေးရတဲ့ တနိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတော့ သူတို့လည်း ရှိသမျှအကောင်ထဲကမှ အဖွဲ့ဝင်တွေတအိမ်စီမှာ သူများပြန်မမွေးခင် ထားလို့ ဆံ့သလောက်ပဲ ကယ်နိုင်တယ်။ တယောက် ၁၀ကောင် ၁၅ကောင်ထက် ဘယ်ထိန်းနိုင်မလဲ။
ပိုဆိုးတာက ပိုင်ရှင်ရှိပါရက်နဲ့ အိမ်လည်လွန်ပြီး ပြန်မလာတတ်တဲ့ ကြောင်တွေခွေးတွေ shelter ရောက်သွားလို့ကတော့ ပိုင်ရှင်တွေ အမြန်လိုက်မရှာနိုင်ရင် သွားရောပဲ။
ဒါကတော့ လမ်းပေါ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သန့်ရှင်းနေဖို့ အတွက် ပေးဆပ်ရတဲ့ နောက်က Behind the scene ပေါ့
ကိုယ်မမွေးနိုင်မကြွေးနိုင်ပဲ ကယ်တင်ရှင်အမည်ခံပြီး လိုက်ဖမ်းနေသေးတယ်။ မကြွေးနိုင်တော့သတ်ပြစ်တယ်။ တော်တော်သွေးအေးင်္ပြီးရက်စက်တဲ့သူတွေအကုသိုလ်တော်တ်ေများတဲ့သူတွေပဲ။ ဒီလို အလုပ်ရှုပ်ခံလိုက်ဖမ်းပြီး မကြွေးနိုင်တော့သတ်ပြစ်တာ သတ္တ၀ါညှင်းပန်းသတ်ဖြတ်မှုမြောက်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကိုတော့ ရှုပ်ချပါတယ်။
ကြောင်တွေကိုလွှတ်ထားရင်ကြွက်ပိုခုတ်တတ်တာမို့ တဖက်တလမ်းကအကျိုးပြုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုးကျိုးကတော့လူနေအိမ်ထဲဝင်ပြီးခိုးစားတတ်တာမျိုး တော့ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီတခါတော့ သဂျီးပြောနေကျရဲ့ ပြောင်ပြန်။ လူတွေကြောင့်မဟုတ် ၊စနစ်ကြောင့် လို့ ထင်တာပဲ။
ကက်ချုပ်ကြီးဆီမှာ အရင် ၀င်ခွင့်ပုံစံဖြည့်ပါ..
ပြီးမှ ကြောင်ဝတုတ်ဆီမှာ အင်တာဗျူးဖြေရပါလိမ့်မယ်..
အစွယ်တွေ လက်သည်းတွေပြရုံနဲ့ မလုံလောက်ဖူးလားဟင်။ :-)
အလုပ်သင်တွေ ၊ထရိန်နင်တွေ ဆင်းဖို့ပါလိုသေးလားမသိဘူး
ဒီမှာ အူးကြောင် ဆိုတာပေါ့…
ကြောင်မျက်နှာက မှဲ့လေးနဲ့ တူတယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်။
ခုလိုပုံထဲမှာတော့ ချစ်စရာလေးတွေ ။ အပြင်မှာတော့ အနားကို မကပ်ရဲတာ။ ပွတ်သီးပွတ်သပ် နဲ့ အူယားလို့ ဝေးရာပြေးတာပဲ။
ပုံတွေ အကုန်ကောင်းတယ်။ ရိုက်တတ်လိုက်တာ။
ခွေးပုံလေးတွေ လည်း ရိုက်ပါအုန်း။
နာမည်ပြောင်းချင်တယ်ဆို kitty candy ဆိုတဲ့ နာမည်ရော မကြိုက်ဖူးလား။
မမယ်ပုရေ၊ ခွေးလေးတွေပုံရိုက်ချင်တာ ခွေးကြောက်လို့ အနားမကပ်ရဲသေးဘူး။ ကိုလုလင်ရော မမပုရောပြောလို့ ခွေးလေးတွေ ရှာရိုက်ဦးမှပဲ။
ကြောင်လေးတွေက အနားကပ်ရမှာကြောက်ဖို့မကောင်းပါဘူးရှင့်။ ဖက်လို့သိပ်ကောင်း။ ကြောင်လေးတွေပိုက်ထားတဲ့တွေသာပါရင် ဖက်ချင်သွားမှာ